नेताको व्यथा « Hamrosyangja.com :: syangja and waling bazaar latest news, people, photos and more.
« युबा बैज्ञानीक दीपक सुबेदी
दोस्रो चरणको साक्षरता अभियान; अर्थ मन्त्रालयद्वारा बजेट रोक्का »
मानौँ, ऊ नै सर्वत्र हो । फुकेको राँगोझैँ नेता यतिखेर गुन्डा बन्न पनि सक्छ । तर, जब खाँदा खाँदा भुँडी फुट्न खोज्छ, ऊ बिरामी पर्छ । बस्, भोगपछिको योग हेर्न लायक हुन्छ । उसको जति भुँडी बढ्छ, उति टाउको सानो बन्छ भन्ने कुरा सत्य सावित हुन्छ । अर्थात्, मूर्तिकारलाई नेताको मूर्ति बनाउन दुइटा बल भए पुग्छ । ठूलो बलमाथि सानो बल राखेपछि उसको सही सालिक बन्छ । उसको यो रूपमा मान्छेले केही लछारपाटो लगाउन नसके पनि कागले देखाइदिन्छ । उसका अनुयायी भए ‘बिष्टा सफा आयोग’ बन्ला ! नभए उसको रूप बिष्टामय बन्ला ! राजनीतिको उलटपलट भनेकै यही हो ।
नेता दुई किसिमका मात्र छन् । एकथरी नेता अर्कालाई नाङ्गो पारेर आफू लुगा लगाउँछन् । अर्काथरी नेता आफू नाङ्गिएर अर्कालाई लुगा लगाइदिन्छन् । अर्कालाई नाङ्गो पारेर आफू लुगा लगाउने नेताले भोलि आफूलाई पनि नाङ्गो पार्छन् भन्ने कुरा बिर्सन्छन् । आफू नाङ्गिएर अर्कालाई लुगा लगाइदिने नेतालाई लुगाको खाँचो हुन्न भन्ने कुरा धेरै नेताको आत्मज्ञान हुन्न । नेतालाई नेता बनाउने जनता हुन् । तर, जनतामा पनि आत्मज्ञान नदेखेर नेताको सपना कहिल्यै साकार नपारेका हुन् । जनताको आत्मज्ञान भएको भए अब जनता सहिद हुने पालो पुग्यो, नेता हुनु पर्‍यो, नेता भन्नु पर्‍यो । जनता र नेतामा भिन्नता नै यही हो कि जनता सहिद बनेपछि नेता दरन्िछ । नेता सहिदै नबनी नेता दरन्िछ । अर्थात्, जनता सहिद भएर जिउँदो बन्छ । नेता जिउँदो भएर मरेतुल्य हुन्छ । यो सिद्धान्त त्यतिबेलासम्म लागू हुन्छ, जतिबेलासम्म नेता जनता बन्दैनन् र जनता नेता बन्दैनन् । अर्थात्, जनताले नेता बनाउँदैनन् र नेताले जनता बनाउँदैनन् ! नेता जननेता भन्दाभन्दै धननेता बनेको पत्तै हँुदैन । यसैले त नेता घैँटो हो भनेको । बुद्धिको बिर्को नउघारी घैँटोमा घाम के लाग्ला ? Taken from:www.majheri.com
This entry was posted on Friday, May 15th, 2009 at 5:37 am	and is filed under पाहुनाको पालो, मनोरन्जन. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.